Waxgarad iyo culimo ka soo jeeda degmada Caabud Waaq oo Baaq iyo digniin u diray Beesha degmadaasi degta ka dib markii Qabuuriyiintu halkaasi dhaq dhaqaaqyo ka bilaabeen. | Halganka Online
Waxgarad iyo culimo ka soo jeeda degmada Caabud Waaq oo Baaq iyo digniin u diray Beesha degmadaasi degta ka dib markii Qabuuriyiintu halkaasi dhaq dhaqaaqyo ka bilaabeen.
Posted on Abriil 26, 2010 by halganka
Waxgarad ka soo jeedo degmada Caabud Waaq gobalka G.gaduud ayaa uga digay shacabka ku dhaqan Miyiga magaaladaasi in ay ka qayb qaataan dagaal ay abaabulayaan Kooxda Ahlusuna labaxday ee Mushrikiinta ah.
Kadib markii uu shalay Caabud Waaq gaaray gudoomiyaha Qabuura galeenka Macalin Maxamuud ayuu odayaasha degmada Caabud Waaq ka codsaday in ay u qoraan maleeshiyaad badan oo ka qayb qaata dagaallo Shabaabul Mujaahidiin lala galo.
Macalin Maxamuud oo boorsooyin Dollar ah sida ayaa lasheegay in uu odayaasha ku faraqay kumanaan Dollar si ay u siiyaan maleeshiyaad dagaal u gala arrintaas ayaa waxaa ka dhiidhiyay waxagardka Beesha Sede Bari.
Kulan balaaran oo ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen odaal iyo culimaa’udiin ka soo jeedo Caabud waaq ayay dadka deegaanka ugu baaqeen in ay carruurtooda ka ceshtaan Qabuura galeenka.
Sheykh C/Caziiz Xasan oo maant shir Jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in Qabuuriyiintu ay xireen Masaajid iyo goobo Waxbarasho oo Caabud waaq ku yiilay taasina ay dhibaato ku tahay bulshada.
“Bulshada Caabud Waaq,Balanballe iyo Dhabad waxaan ugu baaqaynaa in ay iska diidaan lacagaha ladoonayo in lagu dagaal geliyo caruurtooda, waxaad ogaataan in wiilashiina ay aduun iyo aakhiro halaagsami doonaan hadii ay Qabuuriyiinta la soo saftaan” ayuu yiri Sheykh C/casiis.
Maleeshiyada Caabud Waaq ayaa sanadkii la soo dhaafay albaabada ulaabtay Masaajidyo lagu cibaadaysto iyo gooba waxbarasho oo ku yaalay degmadaasi, Beelaha dega Caabud Waaq iyo Xeraale ayaa weli lamurugoonaya khasaarihii ka soo gaaray dagaaladii Wabxo iyo Warxoolo xiligaas oo ay Shabaabul Mujahidiin iyo Xisbul islaam Gowrac marsiiyeen in kabadan 150 Maleeshiyaad Qabuura galeenka ka Barbar dagaalamayay.
Qabuura Galeenka ka soo jeeda Guriceel iyo Dhuusamareeb ayaa diidmo kala kulmay beelaha ay ka dhasheen oo udiiday in maleeshiyaad la siiyo ka dib markii Dhalinyaro badan looga laayay dagaalada G/gaduud.
« Wilaayada Islaamiga gobalka Banaadir oo goordhaw fulisay xukuno Islaami ah. Xisbul Islaam Garabka Axmed Madoobe iyo xukuumada ridada uu hogaamiyo murtad shariif ah oo Heshiis Midnimo ah ku gaaray Wadanka Kenya (Warbixin faah faahsan). »